ဘောပင်စက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Pen Machines စက်ရုံ
ထုပ်ပိုးခြင်း - MO pen box တွင်ပါဝင်သည် - ဆေးမင်ကြောင်ထိုး * ၁ silicone RCA ကေဘယ်လ် * ၁ အရောင် - အနက်ရောင် - မီးခိုးရောင် ၃ အရောင်များ Parameters - ၁။ ဆက်သွယ်မှု: RCA မျက်နှာပြင် ၂။ ပစ္စည်း - အလူမီနီယမ်အလွိုင်း ၃။ ယာဉ်: ပေါင်းစပ်ထားသောပန်းပု ၄။ မော်တာ: Mabuchi II motor5Starting voltage: 5v 6. Working voltage: 8V 7. Rotation speed: 8V9000 to 8. Stroke: 0-3.5mm Selling point: ၁။ ကိုယ်ထည်ကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အရောင်, ဖက်ရှင်နှင့်ဖက်ရှင်; ၂။ connection line interface သည် gold gold ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Tattoo Pen (Coreless Motor) အသားတင်အလေးချိန် - ၁၀၅ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၂၃၉ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၁၂၂ * ၂၅ မီလီမီတာ (လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုအတွက် ၂၃.၅ မီလီမီတာ) ထုပ်ပိုးခြင်း - clamshell box + RCA line အရောင် - ၄ ရောင်အရောင် - အနီ - ပန်းရောင် - ပန်းရောင် Parameters: ၁။ Interface: RCA interface ၂။ ပစ္စည်း - Aluminum သတ္တုစပ် ၃။ လုပ်ငန်းစဉ် - CNC ပေါင်းစပ်ထားသောတိကျစွာထွင်းထုခြင်း - ၄။ မော်တာ - Coreless 17 * 25 မော်တာ ၅။ Starting voltage - 5v 6. အလုပ်လုပ်သောဗို့အား - ၇-၉V 7. Stroke: 0-3.5 မီလီမီတာ ၈။ အပ်ထွက်ပေါက် - အထွေထွေ Cheyenne ၏အားသာချက် - ၁။ ကိုယ်ခန္ဓာသည်စေ့စပ်သေချာသည်။
အသားတင်အလေးချိန်: 215g စုစုပေါင်းအလေးချိန်: ၃၅၀ ဂအရွယ်အစား: ၁၄၉ * ၃၀ မီလီမီတာ (ဘက်ထရီအစိတ်အပိုင်း) (လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းအပိုင်း ၂၈ မီလီမီတာ) အထုပ် - လီသီယမ်ဘက်ထရီတက်တူးထိုးကလောင် + USB ကြိုးကြိုးအရောင်: ၄ အရောင်များ၊ အနက်ရောင် - မီးခိုးရောင် - အနီရောင် - ပန်းရောင်ဖွဲ့စည်းပုံ: ထည့်သွင်းထားသောလီသီယမ် ဘက်ထရီ, ဘက်ပေါင်းစုံတက်တူးထိုးကလောင်, အလယ် lithium ဘက်ထရီ၏အထက်တစ်ဝက်ကိုအစားထိုးဝက်အူဖြုတ်နိုင်ပါတယ်; ၁။ Android USB ဒေတာကေဘယ် ၂။ စျေးကွက်ထဲရှိပေါင်းစပ်ထားသောအပ်များအများစု (Cheyenne standard size) ၃။ အားသွင်းစရာခေါင်းစဉ်မရှိပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံတွင်သင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ကြီးမားသောလှိုင်းတံပိုး Tattoo Pen (Coreless Motor)
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တက်တူးထိုးပစ္စည်းများ RCA တို့ Rotary Pen စက်များ - Coreless Flat Motor Tattoo Pen Gun - အသားတင်အလေးချိန် - ၁၂၀ ဂရမ်အလေးချိန် - ၂၉၅ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၈၆.၂ * ၃၀ မီလီမီတာ (အောက်ခြေအဆုံး၌ ၂၈.၈ မီလီမီတာ) ထုပ်ပိုးခြင်း - အပေါ်နှင့်အောက်အဖုံးပါသည့်ကလောင်သေတ္တာ + RCA လိုင်း။4အရောင်များ - အနက်ရောင် - အနီရောင် - ပန်းရောင် Parameters: 1. Interface: RCA Interface 2. ပစ္စည်း: Aluminum သတ္တုစပ် 3။ လုပ်ငန်းစဉ်: CNC ပေါင်းစပ်ထားသည့်ဒဏ်ငွေ။ 4. Motor: Coreless flat motor 5. Starting voltage: 5V 6. Working voltage:7-9V 7. Speed: 9V12000 rpm 8. Stroke: 0-3.5mm ...
အသားတင်အလေးချိန် - ၁၉၆ ဂရမ်အလေးချိန်စုစုပေါင်း - ၃၃၀ ဂအရွယ်အစား - ၁၄၅ * ၃၃ မီလီမီတာ (ဘက်ထရီအပိုင်း) (လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းအပိုင်း ၂၈.၅ မီလီမီတာ) အထုပ် - လီသီယမ်ဘက်ထရီတက်တူးထိုးကလောင်အမည် + USB ကြိုးကြိုးအရောင် - အရောင်တစ်မျိုး၊ အနက်ရောင်စက်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ: ပါဝင်သည့်လီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ ဘောပင်, အလယ် lithium ဘက်ထရီ၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုအစားထိုးဖြည်နိုင်ပါတယ်; ၁။ Android USB ဒေတာကေဘယ် ၂။ စျေးကွက်တွင်အပ်ထားသောအပ်အများစုသည် (Cheyenne standard size) ၃။ ဖွဲ့စည်းမှုတွင်အားသွင်းစရာမလိုပါ။ သင်တိုက်ရိုက် ...
အသားတင်အလေးချိန်: 205g စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 340g အရွယ်အစား: 149 * 32mm (ဘက်ထရီအစိတ်အပိုင်း) (လက်ဆွဲအစိတ်အပိုင်းအတွက် 30.5mm) အထုပ်: လီသီယမ်ဘက်ထရီတက်တူးထိုးကလောင် + USB ပါဝါကြိုးအရောင်:3အရောင်များ, အနက်ရောင်အနက်ရောင်စက်ဝိုင်း - အနီရောင်စက်ဝိုင်း - ဖွဲ့စည်းပုံ: တပ်ဆင်ထားသည့်လီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ တက်တူးထိုးထားသောကလောင်တံ၊ အလယ်ပိုင်းကိုပြန်ဖွင့်နိုင်သည်၊ အကျုံးဝင်သောသက်ဆိုင်သော ၁။ Android USB ဒေတာကေဘယ် ၂။ စျေးကွက်ထဲရှိပေါင်းစပ်ထားသောအပ်များအများစု (Cheyenne standard size) ၃။ config တွင် charging head မရှိပါ။
အသားတင်အလေးချိန် - ပတ် ၀ န်းကျင် - ၂၀၉ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၃၄၅ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၁၅၃ * ၃၂ မီလီမီတာ၊ (လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုအတွက် ၃၁.၅-၃၂.၅ မီလီမီတာ) အထုပ် - လီသီယမ်ဘက်ထရီတက်တူးထိုးကလောင်အမည် + USB ကြိုးကြိုးအရောင် - အနက်ရောင် - ရွှေရောင် - ဖွဲ့စည်းပုံ: ပါ ၀ င်သည့်လီသီယမ်ဘက်ထရီ ဘက်ပေါင်းစုံတက်တူးထိုးကလောင်တံသည် lithium ဘက်ထရီ၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုအစားထိုးရန်အလယ်ကိုအပေါက်ပြန်ထားနိုင်သည်။ ၁။ Android USB ဒေတာကေဘယ် ၂။ စျေးကွက်တွင်အပ်ထားသောအပ်အများစုသည် (Cheyenne standard size) ၃။ charging head မပါရှိပါ။ သင်တိုက်ရိုက်သုံးနိုင်သည်။
အသားတင်အလေးချိန်: 228g စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 363g အရွယ်အစား: 145.5 * 33mm (ဘက်ထရီအစိတ်အပိုင်း) (လက်ဆွဲအစိတ်အပိုင်းအတွက် 33.5mm) အထုပ်: လီသီယမ်ဘက်ထရီတက်တူးထိုးကလောင် + USB ပါဝါကြိုးအရောင်: တစ်ခုတည်းအရောင်, အနက်ရောင်စက်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ: built-in lithium ဘက်ထရီ, ဘက်ပေါင်းစုံ tattoo pen, အလယ်ပိုင်း lithium ဘက်ထရီ၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုအစားထိုးဖြင်နိုင်ပါတယ်; ၁။ Android USB ဒေတာကေဘယ် ၂။ စျေးကွက်ထဲရှိပေါင်းစပ်ထားသောအပ်များအများစု (Cheyenne standard size) ၃။ အားသွင်းစရာမလိုပါ၊ သင်ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
အသားတင်အလေးချိန်: 200 ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 340g အရွယ်အစား: 145.5 * 32mm (ဘက်ထရီအစိတ်အပိုင်း) (30mm လက်ဆွဲအစိတ်အပိုင်း) အထုပ်: လီသီယမ်ဘက်ထရီတက်တူးထိုးကလောင် + USB ပါဝါကြိုးအရောင်: တစ်ခုတည်းအရောင်, အနက်ရောင်စက်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ: built-in လီသီယမ်ဘက်ထရီ, ဘက်ပေါင်းစုံတက်တူးထိုးကလောင် , အလယ် lithium ဘက်ထရီ၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကိုအစားထိုးဝက်အူဖြုတ်နိုင်ပါတယ်; ၁။ Android USB ဒေတာကေဘယ် ၂။ စျေးကွက်ထဲရှိပေါင်းစပ်ထားသောအပ်များအများစု (Cheyenne standard size) ၃။ အားသွင်းကိရိယာခေါင်းစဉ်မရှိပါ၊ ဖွဲ့စည်းပုံတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Lightning Tattoo ဘက်ထရီဘောပင်
ထုပ်ပိုးခြင်း - အဖုံးနှင့်အထက်အဖုံး + တက်တူးထိုးဘောပင်၊ USB ကြိုးကြိုးဖွဲ့စည်းမှု - ပါ ၀ င်သည့်လီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ ပေါင်းစပ်ထားသောတက်တူးထိုးတံ၊ အလယ်လက်စွပ်ကိုလီသီယမ်ဘက်ထရီအစားထိုးရန်လှည့်နိုင်သည်။ ၁။ Android USB ဒေတာကေဘယ် ၂။ စျေးကွက်တွင်အပ်ထားသောအပ်အများစုသည် (Cheyenne standard size) ၃။ ဖွဲ့စည်းမှုတွင်အားသွင်းခြင်းခေါင်းစဉ်မရှိပါ။ သင်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းစက်ကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ: ၁။ ပစ္စည်းအရည်အသွေး: လူမီနီယံအလွိုင်း, LOGO လေဆာထွင်းနိုင်ပါတယ်; ၂။ လုပ်ငန်းစဉ် - စီအင်စီ
Coreless Motor ဖြင့်သဘာ ၀၀ န်းကျင်ရှိသောမိတ်ကပ် & Tattoo Pen စက်များ
RCA Interface Tattoo & Makeup Pen သေနတ်တက်တူးနှင့်မိတ်ကပ်အတွက် Coreless Motor Tattoo Pen Machine အသားတင်အလေးချိန် - ၈၇.၂ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၂၀၇ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၁၂၄.၅ * ၁၈.၅ မီလီမီတာ (အလယ်တွင်အကျယ်ဆုံးမှာ ၂၄ မီလီမီတာ) ဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်း - clamshell box + RCA လိုင်းအရောင်:4အရောင်များအနက် - အနီရောင် - မီးခိုးရောင် - ရွှေ Parameters: 1. Interface: RCA interface 2. ပစ္စည်း: Aluminium alloy 3. Process: CNC ပေါင်းစပ်ထားသောတိကျသောထွင်းထုခြင်း 4. Motor: Coreless 17 * 25 motor 5. Starting voltage: 5v 6. Working voltage: 7-9V 7. Stroke: ၃.၅ မီလီမီတာ ၈ ။